အနုပညာအလုပ်ကို အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ မောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီးနေတိုးရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်ဗီဒီယိုဖိုင် – Nyi Ma Lay
အနုပညာအလုပ်ကို အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ မောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီးနေတိုးရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်ဗီဒီယိုဖိုင်
By Ko AyePosted on April 11, 2022 April 11, 2022
ချစ်လှစွာ ပရိတ်သတ် တွေရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ တွေကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချော လေး သက်မွန်မြင့် ဟာဆိုရင် ပီပြင် ပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ချစ်သက်က သူမချစ်တဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း မိသားစုလေးကို အချိန်ပေး ဂရုစိုက် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်နေသလို အိမ်ထောင်မှု တာဝန်တွေ လည်း မလစ်ဟင်းတဲ့ သက်မွန်မြင့် က အိမ်ထောင်ရှင် မကောင်း တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်…။
မင်းသားချော နေတိုးနဲ့ မသဲစုမြတ်ရွှေ တို့ရဲ့ မဂ်လာပွဲကြီးကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားစွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် တက်ရောက် ချီးမြှင့်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်. ။ သူရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးကို ချစ်ခင်တဲ့ အခြားသော အနုပညာရှင် မောင်နှမ များစွာ တက်ရောက် ချီးမြှင့် ခဲ့ကြတာကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။
မဂ်လာပွဲကြီးမှာ အနုပညာညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလည်း တတ်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး မဂ်လာဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်သက်မွန်မြင့်ကလည်း နေတိုးရဲ့ မဂ်လာပွဲကြီးကို တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗီဒီယိုလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
ခ်စ္လွစြာ ပရိတ္သတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ေတြကို အျပည့္အဝ ရရွိထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာ ေလး သက္မြန္ျမင့္ ဟာဆိုရင္ ပီျပင္ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်ရာ ဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ အတြက္ အကယ္ဒမီ ထူးခၽြန္ဆုႀကီးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ ခ်စ္သက္က သူမခ်စ္တဲ့ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ရင္း မိသားစုေလးကို အခ်ိန္ေပး ဂ႐ုစိုက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြ ရိုက္ေနသလို အိမ္ေထာင္မႈ တာဝန္ေတြ လည္း မလစ္ဟင္းတဲ့ သက္မြန္ျမင့္ က အိမ္ေထာင္ရွင္ မေကာင္း တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္…။
မင္းသားေခ်ာ ေနတိုးနဲ႔ မသဲစုျမတ္ေရႊ တို႔ရဲ့ မဂ္လာပြဲႀကီးကို ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနတိုးရဲ့ မဂၤလာေဆာင္ကို ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္. ။ သူရဲ့ မဂၤလာပြဲေလးကို ခ်စ္ခင္တဲ့ အျခားေသာ အႏုပညာရွင္ ေမာင္ႏွမ မ်ားစြာ တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရ ပါတယ္။
မဂ္လာပြဲႀကီးမွာ အႏုပညာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလည္း တတ္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး မဂ္လာဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္သက္မြန္ျမင့္ကလည္း ေနတိုးရဲ့ မဂ္လာပြဲႀကီးကို တတ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဗီဒီယိုေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္။
Previous post သူမ မသိအောင် ပရိသတ်တစ်ဦးက သူ့နာမည်ကိုလက်မှာတက်တူးထိုးပြီး စပရိုက်လုပ်ခံလိုက်ရလို ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မေသက်ခိုင်
Next post သူမရဲ့ ချစ်သူဟောင်းအေးနေဝင်းနဲ့ တရားဝင်လမ်းခွဲပြီး နောက်ထပ်ချစ်သူအသစ်ရနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို မသိသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်